Xog: Maxaadan ogeyn oo kusoo kordhay garoonka Aadan Cadde? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Maxaadan ogeyn oo kusoo kordhay garoonka Aadan Cadde?
Xog: Maxaadan ogeyn oo kusoo kordhay garoonka Aadan Cadde?
Muqdisho (Caasimada Online) – Jawiga magaalada Muqdisho ayaa maanta ka duwan sidii hore, maadaama dowlada Soomaaliya ay shaacisay inuu ka dhacayo shirka urur goboleedk IGAD oo madaxda IGAD ay ka qeyb galayaan.
Waxaa maanta gabi ahaanba la joojiyay diyaaradihii rayidka ahaa ee imaan jiray magaalada Muqdisho ee caasimada SOomaaliya kuwaasi oo gobolada dalka iyo dalalka kale ka imaan jiray.
Sababta loo joojiyay duulimaadyadii imaan jiray magaalada Muqdisho ayaa lagu sheegay iney tahay shirka urur goboleedka IGAD ee maanta ka dhacaya magaalada Muqdisho.
Qaar kamid ah shaqaalaha garoonka Aadan Cadde ayaa inoo xaqiijiyay in maanta wax duulimaadyo ah aysan garoonka ka jirin, marka laga reebo diyaaradaha madaxda keenaya iyo kuwa saraakiisha ciidanka ay la socdaan.
Dhibaatooyin badan oo soo wajahay shacabka ayaa maanta ka jira magaalada Muqdisho, waxaana sabab u ah shirka IGAD, sidoo kale waxaa maanta la joojiyay duulimaadyadii ka imaan jiray dalalka deriska la ah Soomaaliya.